I-UAE kwi-Track Track | Vula kwi-Innovations kunye ne-Creativity
I-UAE kwi-Track Track
Amandla amahle kunye namahle ase Dubai
Ngamana 30, 2019
Indlela yokufumana umhumushi waseTshayina e-Dubai?
E papashwe ngu Inkampani yeSixeko sase Dubai at Juni 2, 2019
I-UAE ize kuqala emhlabeni jikelele kwiiNkqubo zokuLawula, okwesibini kwi-International Trade, Productivity kunye neNtsebenzo, iSiseko seZiseko, iziNkolelo kunye namaxabiso kunye neyesithathu emhlabeni kwiMali kaRhulumente kunye neNkxaso-mali.
I-United Arab EmiratesI-UAE igcine isikhokelo sayo sommandla yaza yabekwa kwindawo yesihlanu kwihlabathi liphela kukhuphiswano lwehlabathi, ngokutsho kweNcwadi yeHlabathi yoKhuphiswano yeHlabathi yoNyaka 2019, epapashwe liZiko laseSwitzerland elisekwe kwiziko loLawulo loLawulo, i-IMD. Namhlanje "i-UAE ingena ngaphezulu kwesihlanu okokuqala," yatsho i-IMD World Competitiveness Rankings.
I-2021 - i-2030: I-UAE iya kuba iphumelele i-Abu Dhabi Umbono wezoqoqosho 2030, uMbono weNdawo esingqongileyo i-2030 (Abu Dhabi), Isicwangciso se-Abu Dhabi 2030, isiCwangciso-nkqubo se-Abu Dhabi sohambo lokuhamba ngenqanawa, isiCwangciso soMsebenzi oPhezulu woThutho (Abu Dhabi), dubai Isicwangciso sokuThutha ezizimeleyo, Icebo lokuSebenza leDubai i-2030, isiCwangciso sokuPrinta se-Dubai 3D kunye ne-Ajenda ye-UN ye2030. (Portal kaRhulumente wase-UAE)
Ungakhohlwa abahlali ekuhambeni okukhawulezayo kwi-Smart Future.
Iziqulatho ezipheleleyo zeemeko zesikhokelo esiphakathi zikhokelela yonke imisebenzi kunye nokuphepha ukutshintshwa kwexesha elincinane kwisicwangciso, sinokubona kwezinye iindawo zomhlaba.
Phantse wonke umntu uye wafumana ixesha okanye elinye kwigumbi lokuhlangana emhlabeni wonke: Udumo lweemveliso ezintle, iinkonzo ezinkulu, i-Olympus yobuchule obuqhutywe yi-elite yomsebenzi webhizinisi.
Olunye uhlobo luhlangene namava amnandi kwimeko yentlonipho kunye nokuphulaphula. Umntu ngamnye othatha inxaxheba ushiya iseshoni yobuchule kunye nokukhula kolwazi.
Inyathelo ukuya kwixesha elizayo elisekelwe kwilifa lemveli.
Endleleni eya eluhlaza u-UAE
Amazwe anotyebileyo e-GCC aqala ukuhamba eluhlaza kwaye azinikezele ekujonganeni noqoqosho lwawo ngaphandle kwezinto ezikhoyo. Nangona umqhubi oyintloko womgudu wokunciphisa ukunciphisa amathuba okuwa kwamaxabiso eoli, iiNtlanga ze-GCC zizama ukuphendula ngokufuna ukunyuka kwezenzo kwiinguqu zemozulu.
Imbono yansuku zonke kwiimpapasho zentengiso ibonisa inani elikhulayo leeprojekthi eziluhlaza kummandla. I-UAE isendleleni yokunciphisa i-carbon footprint.
Ungakhohlwa ukuguquka kwesimo sezulu.
IDubai yahlala iyindawo enomtsalane kwihlabathi liphela jikelele utyalo-mali (FDI) njengoko yarekhoda i-41 ipesenti yokukhula konyaka kwi-FDI kunyaka ophelileyo ukuya kwi-Dh38.5 yezigidigidi, ibeka i-emirate kwindawo yokuqala kwinani elipheleleyo leeprojekthi ze-FDI kunye nokuhamba kwemali. (Khaleej Times)
Ukujonga ngaphandle kwefestile kwindlela yokukhwela komzila obomvu ngokugqithiseleyo kukuthetha okumangalisayo kwamandla oqoqosho. Impawu zokuqala zokumisa abadlali behlabathi jikelele ziphezulu, kodwa kusekho into eninzi yokwenza.
Ukuthengisa ubuchwephesha bendawo kwiimarike zehlabathi kukuthatha isinyathelo esibalulekileyo esilandelayo.
Ulutsha ku xanduva
"Ilishumi elidlulileyo kunye nesiqingatha sibonile ukukhula okukhulu kwinani labafundi baseMpuma Mpuma bazalise ubuncinane inxalenye yemfundo yabo yunivesithi ephesheya. Njengoko inani labafundi basemaphandleni belizwe ngamazwe likhuphuka unyaka ngamnye, iintlanga zaseMpuma Ephakathi azigcini nje ukuhamba, kodwa ukwandisa ukumela kwazo. "(TopUniversities.com)
Ukutyelela iikoyunivesithi ezixhotyiswe kakuhle kummandla kuyinto evuyisayo. Eyona ndlela ixhotyiswe kakuhle, ezi ziindawo onokuhlangabezana nazo ezivulekileyo, abantu abafunde kakuhle. Iingxoxo malunga nekamva kunye neendlela ezintsha zivuleleke kwaye zivula ii-horizons ezizodwa kunye nezomsebenzi.
I-UAE ibonisa indlela yokusebenzisa isakhono sesizukulwana esincinane. “Obalaseleyo wakhe uShamma bint uShahail bin Faris Al Mazrui, oneminyaka eyi-22, waqeshwa njengo-Mphathiswa Wezemicimbi Yabantu Abatsha kwi-AUE kwiKhabhinethi entsha, ebhengezwe ngoFebruwari 2016. Kungoko ingumlungiseleli omncinci emhlabeni. Imisebenzi yakhe ijolise ekumeleni imicimbi yolutsha nakwiminqweno kwiBhunga loMphathiswa, ukumisela izicwangciso zophuhliso kunye nezicwangciso zokuphucula amandla ulutsha, ukongeza ekusebenziseni amandla abo kwimikhakha eyahlukeneyo. ”(IUnited Arab Emirates, IKhabhinethi)
Musa ukumisa amava obomi.
"I-Dubai-Abu Dhabi I-12 ngomzuzu we-Hyperloop evuliwe yi-2020" - "Ukwakhiwa kweeprojekthi ezininzi ze-solar concentrated power (CSP) kwihlabathi ziye zaqala e-United Arab Emirates (UAE)." - "Ngaphansi kwezikhokelo zakhe Uphakamileyo uShaikh Mohammed Bin Rashed Al Maktoum, uMongameli weNdunankulu kunye noMphathiswa we-UAE kunye noMlawuli wase-Dubai, i-Dubai Future Foundation ngokubambisana I-Dubai Road and Transport Authority Uqalise iSicwangciso soThutho soThutho lwaseA Dubai. "-" Iqhinga lokushicilela i-Dubai 3D liza kwenza i Dubai ibe yi-hub ye-3D yokushicilela. "
Siphila kwixesha lokuphazanyiswa, apho umjikelo wobomi obutsha ubufutshane ngokukhawuleza. Ummandla ngamnye kwihlabathi ujongene nomngeni ngenye yamaphepha amacandelo okucwangcisa. Ngamanye amaxesha sinokufumana iziphumo ezinonophelo kwiiyunivesithi nakumaziko ophando, kodwa ukuphunyezwa kwale teknoloji enzima kuncitshiswa kwi-jungle ye-bureaucracy. Kuyonwabile ukubona ukuba i-Dubai ithatha umngcipheko wokukhokela ngokuphunyezwa kwiNkxaso ebalulekileyo kwezobuchwepheshe bekamva.
Qhubeka ufezekisa kwaye ufunde ngokusebenza.
I-UAE yabonelela ukwanda kwamanani kwiminyaka embalwa edlulayo ngenxa yokukhula okubonakalayo kumacandelo ahlukeneyo ezoqoqosho okukhokelela ekukhungeni kwabasebenzi abavela kwimvelaphi eyahlukeneyo yenkcubeko kunye nenkolo. Ukusuka kwi-4.1 yezigidi kwi-2005, inani labantu base-UAE lakhula li-8.3 yezigidi ekupheleni kwe2010. Kule ndawo, inani labemi be-UAE lingaphantsi kwezigidi ze-1 (947,947). (Urhulumente waseUAE)
Iintlanganiso zase Dubai zisebenza kwiiprojekthi ezintsha kunye nezoqoqosho ezintsha zibonakaliswe ngu-a udibaniso lwezizwe ezivela kulo lonke ihlabathi. Ubuchule, amava kunye nemvelaphi yenkcubeko zidibaniswe ukusebenza kwixesha elizayo. Xa kuthelekiswa namazwe afana neJamani, le yinto ehlukileyo ngokupheleleyo yentsebenziswano kwiqela. Kule ngxube yezobuhlanga, iintsika zobume besizwe zinika ukuzinza ukuhlala kwindawo efanelekileyo.
isiphelo I-UAE kwi-Track Track
Ukulinganisa ubume belizwe kunye neentlobo zenkcubeko zakha isiseko esomeleleyo endleleni eya kwi-Smart Future.
Umbhali: Roland Spranz-Bridging iYurophu, KuMbindi Mpuma naseAfrika
Ixabiso nge-Innovation UG - iSalzatal - Jamani
I-Hilal Engineering Consultancy - iSohar - iSultanate yaseOman
Isixhumanisi ku-Linkedin - UAE kwiMzila oPhezulu